Nlegharị anya ịgba ígwè na ịgba ígwè. Saịtị igwe kwụ otu ebe
Ajụjụ: Kedu ihe CC na-akwụ maka igwe igwe
Ihe na Nwere ike 20, 2021 By pịa
A na-atụ ike nke injin ọgba tum tum na ikike cubic. Ikike cubic, nke a makwaara dị ka “cc” nke ụgbọ ala, na-adịkarị n'etiti 50cc ruo 1500cc. Ọ bụkwa
Otu esi abawanye uru nke onye na-eketa ihe na igwe igwe Mikes
Ka iwelie ọnụ ahịa onye na-eketa òkè gị, ị ga-emerịrị: Mee ka uru dị elu; Welata ego nke onye na-eketa òkè; Welata ụgwọ; na.Strategies iji belata ọnụ ahịa: Belata ngwaahịa. Belata ọnụ ahịa ngwaahịa (s) gị nke bụ isi) .Welata mkpofu na mmepụta. Lekwasị anya na ya.
Ajụjụ: Gịnị bụ igwe igwe BMx
N'agbanyeghị na ha nwere ọtụtụ myirịta, igwe igwe ugwu ụmụaka na igwe BMX dị nnọọ iche. Emebere igwe igwe BMX maka ndị na-agba ọsọ na-azọ aghụghọ, mwụli elu, stunts, obodo mepere emepe
Ebe ị ga-enye igwe kwụ otu ebe nso m
Nyefee igwe kwụ otu ebe ochie gị ka ọ bụrụ ezigbo ihe ị nwere ike ịnye ya n'ụlọ ahịa ọrụ ebere ka ukwuu, mana biko jụọ ha ma ha nwere ike ịnara ya.
Azịza ngwa ngwa: Kedu ngwa ngwa igwe eletrik na-aga
Kedu ngwa ngwa igwe eletrik nwere ike ịga? Ọ bụrụ na ị na-agbagharị, ị nwere ike ịga ngwa ngwa ka ị nwere ike ịgba ya. Agbanyeghị, ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-akwụsị inye enyemaka eletrik
Otu esi ewepu nchara na igwe igwe
Otu esi ewepu nchara na igwe igwe! Gwakọta soda na mmanya mmanya n'ime pasta wee tinye na ntakịrị ihe ọṅụṅụ lime. N'iji ahịhịa, tinye ihe nkedo na ihe niile
Ebe ị ga-eji igwe kwụ otu ebe dị nso
A na-ejikarị moto 1000cc kacha ọsọ ọsọ na 188 mph site na rev limiter, nke na-echebe injin ụgbọ ala site na igbochi oke ọsọ ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị a elu-ọsọ ọgba tum tum bụ
Otu esi enweta igwe kwụ otu ebe Oras
Otu esi enweta igwe kwụ otu ebe na ORAS Fly to Route 119 wee rịgoro Waterfall dị nso. Fee na okporo ụzọ 111 wee banye n'ọzara na-eji Go-Goggles. Fega na
Okpu agha igwe kwụ otu ebe: nhọrọ, nha, mkpa
Ihe na July 12, 2014 September 15, 2021 By pịa Enweghị asịsa na okpu agha igwe kwụ otu ebe: nhọrọ, nha, mkpa
Ị na-eche nhọrọ ihu: zụta okpu agha ma ọ bụ buru nwa agbọghọ gaa n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị jụụ, olee okpu agha ị ga-ahọrọ? Ewepụla m ajụjụ a ogologo oge, mana n'ikpeazụ ọ bụ oge ikwu maka otu esi ahọrọ okpu agha igwe kwụ otu ebe. Dịka nwa amaala nwere ikike, azụrụ m okpu agha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo m zụtachara…
GỤKWUO "Okpu agha igwe kwụ otu ebe: nhọrọ, nha, mkpa" »
Otu okirikiri nke Steroid ga-emerụ gị ahụ
Ụkwụ m ọ ga-akawanye site na ịgba ígwè
Ga-eme m Fitbit Track ịgba ígwè